विषम परिस्थितिको सामना यसरी गरौँ - नमुना पोष्ट
विषम परिस्थितिको सामना यसरी गरौँ
नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र १२, बुधबार (१ साल अघि)
अहिले विश्वसमुदाय कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । यो महामारीबाट विश्वभर १५ हजार भन्दा बढीको ज्यान गैसकेको छ । करिव ४ लाख सङ्क्रमित छन् भने एक लाख भन्दा बढी उपचार पछि घर फर्किएको छन् । हाम्रै छिमेकी देश चीनको बुहान शहरबाट फैलिएको भनिएको यो कोरोना भाइरसको असर सबै भन्दा धेरै असर युरोपियन मुलुक इटालीमा परेको छ । इटालीमा मात्रै ५५ सय भन्दा बढीको ज्यान गैसकेकोछ । भनिन्छ, जब चीनमा यो भाइरसको संक्रमण फैलियो त्यति बेला युरोपियन मुलुकहरुले यसलाई खासै महत्व दिएनन् । चीन एक्कै यो समस्यासंग मुकाबिला गर्यो । चीनमा करिव ८० हजार जना सङ्क्रमित भएकोमा करिव ३२ सय जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ । अहिले चीनमा यो महामारी नियन्त्रणको नजिक आएको छ भने अन्य देशमा फैलिरहेको पाइन्छ । हालसम्म यो महामारीको औषधि बनि नसकेको कारण मानिसहरुलाई यसले आतंकित बनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत विश्वका वैज्ञानिकहरु यो रोगको औषधीको खोजीमा छन् । विभिन्न परिक्षण भैरहेको छ । तथापि सफलता हात परिसकेको छैन । चिकित्सक तथा विज्ञहरुले शरीरको रोगसंग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि, आत्मबल वृद्धि, सरसफाईमा जोड, पौष्टिक खानेकुरामा जोड, जीवनशैलीमा परिवर्तन जस्ता सुझावहरु यो रोगसंग लड्ने उपायहरुको रुपमा प्रेषित गरेको पाइन्छ ।
नेपाल पनि यो भाइरसबाट प्रभावित भैसकेको छ । हालसम्म दुई जनामा संक्रमण देखिएको छ भने यो लेख तयार पार्दासम्म कसैको पनि मृत्यु भैसकेको छैन । अझै पनि हामी सुरक्षित नै छौं । तथापी सुरक्षात्मक उपाय भने अबलम्बन गर्न नितान्त जरुरी छ । अहिले नेपाल सरकारले चैत्र ११ देखि २१ गतेसम्म ’लक डाउन’ अर्थात अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ गरेको छ । यो समयमा सबै नेपाली आफ्नै घरमा सुरक्षित बस्नुपर्ने हुन्छ । यो निषेधाज्ञा नेपालीको, नेपालीद्वारा नेपालीहरु कै लागि हो भनेर बुझ्नु पर्छ । अति जरुरी काममा बाहेक घर बाहिर निस्कनु हुन्न । कसैको घरमा पाहुना लाग्न वा कतै घुम्न पनि निस्कन हुँदैन । यदि तपाइँ सिमा नाकाबाट स्वदेश आउंदै हुनुहुन्छ भने सरकारले तोकेको निश्चित ’क्वारेन्टाइन’ स्थलमा निश्चित समय बस्नु पर्छ । भागेर अन्यत्र जाने प्रयास गर्नु हुँदैन । सरकारले हाम्रै लागि यो काम गरेको भएर बुझ्नुपर्छ । सरकारलाई सहयोग गर्नु नागरिकको मुख्य भूमिका पनि हो । अहिले सरकारलाई विरोध गर्ने बेला होइन ।
सारा नेपाली आफ्नै घरमा सुरक्षित रहने प्रयास गरिरहेका अबस्था छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले पनि कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय र सावधानीका विषयमा प्रचारप्रसार गरि जनचेतना फैलाईरहेका छन् । अब हामी नागरिकहरुले पनि नागरिक कर्तव्य पालना गरि सरकारी निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिलाई सामना गर्न हामी सबैको पहल र साथ सहयोग आवश्यक पर्दछ । हामीले कोरोना भाइरसका सम्वन्धमा सामान्य जानकारी लिनुपर्छ तर अनावश्यक हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन । यो एक किसिमको भाइरस (सुक्ष्म जीवाणु)को आक्रमणबाट हुने रोग हो । यो भाइरस पशुपंक्षीबाट मानिसमा सरेको भनिएको छ । यो भाइरसको संक्रमण भएपछि शुरुमा सुख्खा खोकी लाग्ने, १००.४ फरेन हाइट भन्दा बढी तापक्रममा ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा असर पार्ने, कडा किसिमको निमोनिया हुने जस्ता लक्षणहरु देखिने बताइएको छ । यद्यपी रगत परिक्षण नगरी लक्षण कै भरमा यकिन गर्न भने सकिदैन । यसको लागि हामी आफै सजग हुन जरुरी छ । भिडभाडमा जान हुँदैन । मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ । व्यक्तिगत सरसफाइमा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ । सात्विक अर्थात् शाकाहारी भोजनको सेवन गर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमितमध्ये ९० प्रतिशत उपचारपछि घर फर्केका छन् । त्यसैले यो रोग लाग्ने वित्तिकै सबै सङ्क्रमित सबै मर्दैनन् । त्यसैले आत्मबल बढाउनुस् । शारिरिक सक्रियता बढाउनुसु । सकारात्मक बन्नुसु । समस्यालाई सामान्यरुपमा लिनुस् । जस्तै विपत आउँछ, जान्छ, विगतमा भूकम्प आयो अनि गयो तर सुरक्षाको पूर्व तयारी भने गर्नुपर्छ । एउटै घटनालाई बारम्बार मस्तिष्कमा दोहोर्याईरहंदा यसले झन् असर पार्नसक्छ । नियमित सरसफाईमा ध्यान दिउँ । शरीरलाई सक्रिय राखौं । यसको लागि योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम गरौँ । नियमित उमालेको मन तातो पनि पिउने गरौँ । यसका साथै तुलसी, कागती, मरिच, अदुवा, बेसार, ज्वानो, जिम्मु आदिको काँडा वा झोल बनाएर पिउन सकिन्छ । पोषिलो भनिने खानेकुरा खाँदैमा एकाएक हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्ने होइन । तिनीहरुलाई मिलाएर नियमित सन्तुलित किसिमले सेवन गर्नुपर्छ । विश्वमा मानिस खान नपाएर होइन खान नजानेर रोगी भएका छन भन्ने कुरो बुझौं ।
प्रकृतिलाई दोहन होइन, यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै यसको सदुपयोग गरौँ । प्रकृतिका सबै जीवजन्तु, प्राणीको उत्तिकै महत्व र अस्तित्व छ । यिनको संरक्षण गरौँ । अहिले मानिसले आधुनिकताको नाममा जे पनि गर्ने अनि जे पनि खाने गरेका छन् । यो धर्तीमा पाइने सबै जीवलाई बाच्ने अधिकार छ । हाम्रो स्वार्थको कारण तिनीहरुलाई मार्न र खान हुन्न भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जथाभावी र जे पायो त्यही खाए कै कारण आज मानिसले यो महामारी खेप्नु परेको हो । साना भुसुनादेखि ठूलाठूला जीवजन्तु तथा वनस्पति पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलन राख्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । प्राकृति माथि विजय प्राप्त गर्दै गर्दा जलवायु परिवर्तन र यसको असर संगसंगै आएको छ । विकास र आविष्कार मात्र गरेर हुँदोरहेनछ । जब हामीले हाम्रो जीवनशैली र व्यवहारलाई नाटकीय परिवर्तन गर्न सक्दैनौ, यस्ता समस्याहरु बारबार रोहोरिरहने छन् । एड्स रोग कसरी आयो ? सास भाइरस कसरी आयो ? प्लेग रोग कसरी आयो ? जीका भाइरस कसरी आयो ? इबोला भाइरस कसरी आयो ? डेंगु कसरी आयो ? मलेरिया, दादुरा रोग कसरी आए ? मानिस मानसिक रोगबाट किन पिडित छ ? मानिस तनाबमा किन छ ? क्यान्सर रोग कसरी आयो? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग कसरी आयो ? यस्ता रोगहरु अनगिन्ति छन् । के यस्ता रोग आफै आए ? के यी रोग प्रकृतिमा पहिल्यै थिए ? यस्ता रोगहरु हाम्रै विवेकहीन क्रियाकलाप, व्यवाहार, आहार, विहार र जीवनशैलीबाट आएका हुन् । विज्ञानले गरेका कतिपय चमत्कार र विकास मानव समुदायको हित विपरित छन् भने किन प्रशय दिएको ? पोलिथिन अर्थात् प्लास्टिक प्रकृति र मानवजातिलाई हानिकारक छ भने किन उत्पादन जारी राखेको ? कुनै पनि देश आणविक हतियारले सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचाई कोरोना भाइरसले गलत सावित गरिदिएको छ । जीवजन्तुको मासु खाएर बलियो हुने मान्यता गलत भएको छ । मानिसले खाने भनेको सात्विक अर्थात् प्राकृत आहार नै हो । सोच्ने बेला आएन र ?
केही पौष्टिक खानेकुरा खाँदैमा शरीरको रोगसंग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति आज कै मितिबाट एकाएक बढ्ने होइन । अहिले मानिसहरु शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने उपायको खोजीमा छन् । विभिन्न संचारमाध्यम र विज्ञहरुले विभिन्न स्वास्थ्य सुझाव पनि दिइरहेको पाइन्छ । शरीरको प्रतिरोधत्माक शक्ति बढाउन पहिला स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ । त्यसपछि मिसावट र विषादीरहित सन्तुलित खाना आवश्यक पर्दछ । नियमित कम्तिमा एक घण्टा पसिना आउने गरि बिहान शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ । के हामीले यो कुरा हाम्रो जीवनमा नियमित अवलम्बन गर्न सक्छौं त ? हामी आजका आधुनिक र व्यस्त मानिस । सबै काम प्रविधिले गर्छ । खानेकुरा ’रेडीमेड’ छ । घरमा बनेको खाना मन पर्दैन । ठोस(मासु), तरल(मादक पदार्थ), ग्यास(धुम्रपान) युक्त अप्राकृतिक खाना मनपर्छ । यसले हाम्रो शरीरको प्राकृतिक संरचनालाई बिगारिदिन्छ । शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । अनि हामीले सामान्य रोगसंग पनि प्रतिवाद गर्न सक्दैनौ । यसको लागि ब्रोइरल कुखुरालाई हेरे पुग्छ । यो कुखुरालाई सबै थोक दिइन्छ तर यो बलियो हुँदैन ।
ढिलो भएको छैन । आजैबाट शुरु गरौँ । शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्ने किसिमको आहार विहारको अवलम्बन गरौँ । सरकारको अनुरोधलाई पालना गरौँ । अनावश्यक हल्लाको पछि नलागौं । अध्ययात्मिक हुनुहुन्छ भने भगवान सर्वव्यापी छनु, घरबाटै प्रार्थना गर्नुस् । जबसम्म हामीले हाम्रो आधुनिक र पाश्चात्य जीवनशैलीलाई त्याग्दैनौ, तबसम्म समस्या रहिरहन्छ । आफ्नो व्यवहार र जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्दै समस्यासंग जुध्ने प्रण गरौँ ।
बिशेष रिपोर्ट सम्बन्धि थप